How to rank Amazon products like pro pro seller?
Hapana chikonzero chekutaura kuti mutengesi wega wega wega anofanira kunge akaziva kutonga Amazon michina kuitira kuti ivo varambe vari pamusoro pekutsvaga. Ndinoreva kuti kuva nehupamhi hwepamusoro ndiyo inongova nzira chete yekupfuura ipapo, sekuvandudza mafungiro ako ekutsvakurudza anokwanisa kuwana zvigadzirwa zvako zvakananga pamberi pezvinangwa zvevateereri uko. Saka, pasi apa ndichaenda kukuratidza maitiro ekugadzirisa Amazon maitiro semutengesi chaiwo wekutengesa - kbb commercial truck guide. Ngatikurumidzei kumhanya kuburikidza nhanho inotevera nhanho.
Nzira yekuongororwa Amazon Products
Nhanho Yokutanga: Ziva Zvaunonyanya Kuzviisa Tsanangudzo
Ngatitarisei - pane Amazon yakasiyana zvachose neyeyo yatakange tive nayo yezvinjini huru dzekutsvaga seGoogle pachayo. Zvinoreva kuti kuti uzive huru yako yezvinyorwa zvinyorwa uye ega yekutanga runyorwa rwavo iwe uchada kushandisa Google's Keyword Planner tool - kutanga uye zvakanyanya. Nenzira iyo, hauzongogadziri mazita ezvinyorwa zvinyorwa zvekushanda pamwe chete, asi tora mufananidzo mukuru wezvinhu zvose zvinowanzo kushandiswa kwemashoko makuru.
Chitsauko Chepiri: Ongorora Zita Rako Rokutanga muChitarudzo Chekupedzisira
Kana uine runyoro rukuru rwemashoko ako emazwi makuru, inguva yekuita zvishoma shomanana. Ndinoreva kuti iwe unofanirwa kuinatsira mune tsvakurudzo shoma shoma rine zvinyorwa zvako zvakanakisisa zvekufanirwa-kuhwina mazwi ekukosha uye nguva yakareba yemiti yekutsvaga kutsvakurudza. Nenzira iyo, ini ndinokurudzira kushandisa imwe yeiyi ichinyorwa kutsvakurudza uye mazano mashandisirwo akangogadzirirwa maAmerica vatengesi. Inzwa wakasununguka kuedza chero ipi zvayo - kunyanya nokuti ndakaiedza ivo vose nekuda kwezvangu zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa ku Amazon. Mushure mezvose, zvinongova kwauri chete kuti usarudze kuti ndiani angasarudza.
Sellics - mubatsiri uyu wepaIndaneti anonyanya kukosha pamatanho ekutanga emazwi enyu ekutsvakurudza. Kana ndiri ini, ndakashandisa Sellics panguva yekufungidzira. Uye zvinhu zvose zvakanga zvakajeka - zvose zvandaida pane ipapo ndangopinda mavoti angu ezvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa, uye ndobatsirwa nemamwe mazwi anokosha ezvinyorwa mazano uye anobatsira mazano, ayo akadzingwa zvakananga kubva pane yangu yepedyo niche / yechikwata makwikwi kuAmazon.
Sonar - yakaratidza kuti yakandibatsira zvikuru pandakanga ndisingazivi maitiro ekutengesa mazai eAmerica sep pro. Zvichinyatsojeka, ichi chinhu chikuru chinotsvakurudza ruzivo chinoita kuti zvive nyore kuti Amazon muzvitengesi wese awane zvose zvakakosha mazwi uye mutsara wemiswe yakawanda inoshandiswa kutarisa michina yavo zvakanaka. Zvakafanana neSellics keyword tool, Sonar inoda chete chinhu chimwe chete chinyorwa kuti chizadziswe kuitira kukupa zvakanakisisa mazwi ezvinyorwa, zvakatsigirwa nemamwe mabhidhiyo emabhidhiyo, zvakadai semavhareji ekutsvaga kuverenga kwevhesi, maitiro zvino ekushandiswa, etc.